Ny LG G6 dia hanana kinova roa samy hafa ary ny ratsy indrindra dia ity ho an'i Eropa sy Amerika Latina | Vaovao momba ny gadget
Ny LG G6 dia hanana kinova roa samy hafa ary ny ratsy indrindra dia ilay natokana ho an'i Eropa sy Amerika Latina
Omaly izahay dia nanatanteraka ny fandrakofana mivantana ny hetsika notontosain'ny LG Koreana Tatsimo tao anatin'ny rafitry ny Kongresin'ny World Mobile any Barcelona, ​​ary androany ny vaovao momba ny fetran'ny mpampiasa any amin'ny firenena sasany izay alehany manao varotra. Amin'ity tranga ity, ny fahasamihafana dia tsy hoe marihina loatra izy ireo, saingy mazava fa tsy tian'ireo mpampiasa mikasa ny hahazo LG G6 vaovao, satria Nisy zavatra nitovizany tamin'ny taon-dasa tamin'ny LG G5 ary niteraka savorovoro izany.
Fa andao hatsahatra ny firesaka ary tonga amin'ny teboka, izay no mahaliana antsika rehetra. Amin'ity tranga ity, misy fahasamihafana telo eo amin'ireo maodely izay hamidy any Eropa, Amerika Latina ary ny sisa amin'ireo firenena, izay miharihary fa ao Etazonia. Manomboka amin'ny Quad DAC Hi-Fi manatsara ny feon'ny fitaovana, manohy zavatra "manan-danja" kokoa toa ny fahaizan'ny finday avo lenta izay izahay dia ho tonga amin'ny kinova 32GB ihany - avelanao ny kinova 64GB - na dia manampy slot microSD aza izy ary miafara amin'ny famandrihana tsy misy tariby, izay tsy ho ampiana amin'ny kinova eropeana sy latina amerikanina koa.
Raha fintinina dia misy safidy telo mety tsy ho zakan'ny maro sy tena ilaina amin'ny hafa, saingy toa manahirana ihany ny mitantana raha vantany vao natomboka tany amin'ny firenena samihafa ilay fitaovana. ireo mpampiasa «geeky» be indrindra dia ho mazava momba ny tsy fisian'ireo safidy telo ireo amin'ny fitaovana ampiasain'izy ireo arakaraka ny toerana ividianany azy. Tamin'ny taona 2016, nisy zava-dehibe nitranga tamin'ny fomba fahitako azy, ary izany dia tsy dia matanjaka loatra ho an'ny mpampiasa izay nividy azy tany Amerika Latina ilay processeur ary nantsoina hoe LG G5 SE.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Ny LG G6 dia hanana kinova roa samy hafa ary ny ratsy indrindra dia ilay natokana ho an'i Eropa sy Amerika Latina
CloudFlare dia namoaka ny angona manokana avy amin'ny 1Password, Fitbit ary Uber nandritra ny volana maro